France inomisa ndege dzekubuda muKabul kuenda kuParis kuburikidza neAud Dhabi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » France inomisa ndege dzekubuda muKabul kuenda kuParis kuburikidza neAud Dhabi
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
French Secretary of State yeEuropean Affairs Clement Beaune
Kwemakore akati wandei yatove, France yanga iri munzvimbo yekutanga muEurope maererano nekupa hupoteri kumaAfghan munharaunda yayo.
France inomisa zambuko remhepo kuti ribudise vanhu kubva kuAfghanistan.
French yekubuda nendege kubhururuka kubva Kabul kuenda kuParis kuburikidza ne Abu Dhabi.
French kubvisa 'zviuru' kubva kuAfghanistan.
French Secretary of State for European Affairs Clement Beaune ati nhasi France iri kuvaka bhiriji remhepo rekubvisa 'zviuru' zvevanhu kubva kuKabul, Afghanistan kuenda kuParis.
"Parizvino, kuitira kuti ibudise vanhu, France iri kugadzira zambuko remhepo pakati peKabul ne Paris nendege dzichabhururuka nemu Abu Dhabi, ”Beaune akadaro.
“Panguva ino, hatina huwandu chaihwo hwekuti vanhu vangani vachatorwa kubva Afuganisitani kuFrance. Chero zvazvingava, zviri pachena kuti tiri kutaura nezve zviuru nezviuru zvevanhu vanoda kuchengetedzwa, ”akawedzera.
Secretary of state akataura kuti France "yakanga yatanga kubvisa vanhu veAfghan muna Chivabvu kuitira kuchengetedza vanhu mazana matanhatu vaiishandira."
“Kusvika pari zvino, ndege nhatu dzemauto eFrance dzakatomutsa vanhu vanosvika mazana mana. Ava ndivo vazhinji veAfghan avo vanoda kudzivirirwa nekukurumidza. Kazhinji, vazhinji vevaAfghan ava vaishandira vamiriri vakasiyana veFrance, ”akadaro.
Sekureva kwaBeaun, France "inobata kugamuchirwa kwevaAfghan munharaunda yayo nebasa rakazara." “Mumakore achangopfuura, takapa mwenje wakasvibira kune zviuru gumi zvekukumbira kupotera kubva kuAfghans. Kwamakore akati wandei kare, France yanga iri munzvimbo yekutanga muEurope maererano nekupa hupoteri kumaAfghan munharaunda yayo, "akadaro mukuru uyu.
“Tichaenderera mberi netsika iyi. Hapana zviyero zvakawandisa zviripo munzvimbo ino. Tsika yekugamuchira maAfghans muvhu reFrance ichaendererawo mushure mekunge zambuko remhepo nenyika ino ramira, ”munyori wezvematongerwo enyika akavimbisa.
Gunyana 20, 2021 pa 10: 49
Uku ndiko kuuya kwechipiri kwendege muParis kubvira hurumende payakagadzira bhiriji remhepo kuti ribudise zvizvarwa zveFrance neAfghan. Parizvino, kuitira kuti ibudise vanhu, France iri kugadzira bhiriji remhepo pakati peKabul neParis nendege dzichabhururuka kuburikidza neAud Dhabi.